Faminaniana: "Toy ny fifidianana eo amin'ny Isiraely izy, fa tsy misy governemanta miforona akaikin'ny 'ny fiavian' ny Mesia" | Apg29
Inona no zava-misy ankehitriny ny amin'ny Isiraely.
Newspaper clippings ny Yitzhak Kaduri.
Io no fotoana voalohany teo amin'ny Isiraely tantaran'ny fa efa tsy afaka hanangana governemanta. Ankoatra izany, ny sary ny Isiraely nanana safidy roa tamin'ity taona ity, saingy nitondra ny governemanta.
40 taona faminaniana
Misy 40 taona izao faminaniana izay afaka ho mifamatotra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny Isiraely.
Ny faminaniana dia avy amin'ny Rabbi Yitzhak Kaduri dia lehilahy niavaka Jereo ny sary etsy ambony. Tsy vitan'ny satria 108 taona, raha maty tamin'ny 2006.
Izy dia heverin'ny, nianatra sy tia mpampianatra ho an'ny Jiosy maro. Izany no nitranga, dia manome tsara isan'ireo izay nanaraka ny fandevenana dia nanaraka ny filaharana ny 300.000 sy Jerosalema dia miafina ao amin'ny afisy izay niantso fisaonana ny tara Raby Yitzhak Kaduri.
Ny fomba fiainako dia tena tsotra. Niaina fiainana ny fahantrana, dia nihinana kely, niresaka ary zara raha niteny. Na dia teo aza izany, dia nandresy ny sofiny olona maro, rehefa nanao zavatra.
Dia zara raha niteny, fa raha nanao izany dia voasoratra izay nolazainy. 40 taona lasa izay, dia nanontany azy ny fomba Mesia dia hita ao amin'ny politika azo ampiharina ny Isiraely, na nahita izany any? Ny valinteniny dia fohy:
"Tahaka ny fifidianana eo amin'ny Isiraely izy, fa tsy misy governemanta miforona akaikin'ny 'ny fiavian' ny Mesia."
Inona no zava-misy ankehitriny ny amin'ny Isiraely. Io no fotoana voalohany teo amin'ny Isiraely tantaran'ny fa efa tsy afaka hanangana governemanta. Ankoatra izany, ny sary ny Isiraely nanana safidy roa tamin'ity taona ity, saingy nitondra ny governemanta.
Aza manao tsinontsinona ny faminaniana
Mazava ho azy fa ny faminaniana rehetra nandinika fa tsy tokony tsinontsinona, dia hoy ny andininy fohy ity:
"Aza manao tsinontsinona ny faminaniana." 1 Th. 5:20.
Tena ny fotoana hahatakatra fa Jesosy dia afaka ho tonga na oviana na oviana! Tsy afaka ny hangina amin'izao faminaniana miavaka. Ankehitriny dia fa ny andraikitry ny olona izay mamaky ny hafatra momba ny fomba fihetsiky.
Maro no mandà izany ary hiarovan-tena amin'ny hamelezana azy. Isan-karazany ny fanehoan-kevitra manohitra izany tokoa avy.
Ao amin'io faritra ao amin'ny Kristianisma Anarana lehibe tsy tsara ny hevitry ny Mazava ho azy fa ny zava-nitranga akaiky, nahoana no tsy miresaka momba ny hiverenan'i Jesosy.
Naminavina fa maro i Jesosy fa tsy manana toe-tsaina ratsy manoloana ny hafatry ny hiverenan'i Jesosy, ary mino fa tsy afaka mitranga ankehitriny. Izany no antso lehibe ho an'i Jesosy toy izany mpanompo ratsy!
"Fa raha izany mpanompo ratsy sady hoy izy, ny tompoko no nahemotra". Mat. 24:48.
Eto dia afaka manandrana ny tenanao raha oharina amin'ny tenin'i Jesosy ireo, raha izany no Hoy Jesosy, ny mpanompo ratsy fanahy.
Tsy ny mpitsara
Tsy isika no milaza fa tsy i Jesosy. Izany dia tsy voasoratra mba hanameloka ny mpanompon 'ny Tompo, ka tsy indray mandeha indray amin'ny fitiavana miezaka ny hitondra ny andraikitra sy ny mifehy tena.
Ianao nefa tsy voavonjy na miaina ny fiainana diso, dia aza misalasala hahazo Nifandray taminay àry izahay amin'ny Niresaka. Fa efa tsy manosika nisambotra an'i dingana hentitra, dia mety ho tara foana!